रेफ्रीले नदेखेको तर विश्वले देखेको गोल « नेपाली मुटु
« इङ्गल्याण्ड माथि जर्मनीको 4-1 को शानदार जित
अर्जेन्टिनाको अपराजित यात्रा »
इंग्ल्यान्डलाई शानदार ढंगले ४-१ले पराजित गर्दै जर्मनी क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश त गर्‍यो, तर जर्मनीको विजयभन्दा पनि बढी चर्चा इतिहासमा सँधै इंग्ल्यान्डका लाम्पार्डले गरेको यो गोलको हुने निश्चित छ। मध्यान्तर अगाडि २-१ ले इंगल्यान्ड पछाडि पर्दा विश्वले देखेको यो गोल दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा उरुग्वेका रेफ्रीले भने देखेन। यो खेलमा सबै अधिकारीहरु उरुग्वेका नै थिए। मुख्य रेफ्री जोर्गे ल्यारिओन्डा, लाइन्सम्यानहरु पाब्लो फान्डिनो, माउरिसियो एस्पिनोसा र मार्टिनो भाज्कुएज सबै उरुग्वे कै थिए। तर यो गल्तीका लागि रेफ्री मात्र हैन, समग्रमा फुटबलको नियम बनाउने अधिकारीहरु नै दोषी देखिने छन्। किनभने ती अधिकारीहरुले नै गोल लाइन प्रविधि र टिभी रिप्लेलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरुको तर्क छ- ९० मिनेटको खेलमा प्रविधिको सहायता लिँदा खेलको मानवीय पक्ष मर्छ र प्रविधि हावी हुन्छ। अनि के रेफ्रीले तानाशाह जस्तो जस्तो गलत निर्णय गरे पनि स्वीकारिरहने ? यो घटनाले यो विषयमा बहस चर्काउने छ। तपाईँलाई के लाग्छ ? प्रविधिको प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
प्रविधिको प्रयोगका लागि कायरोस र हक आई दुई वटा प्रविधि प्रस्ताव गरिएका थिए। कायरोसमा बलभित्र एउटा चिप हालिन्छ र हक आई टेनिस र क्रिकेटमा प्रयोग हुने प्रविधि हो। केही खेलमा यस्तो गोललाइन प्रविधि प्रयोग पनि गरिएका थिए। तर फुटबलको नियम बनाउने अधिकारीहरु यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न मान्दै मानेनन्।
फुटबलको नियम बनाउने गर्छ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल एसोसिएसन बोर्डले। यो बोर्डमा फिफाको चार भोट हुने गर्छ। बाँकी चार भोट चाहिँ फुटबल खेलको जन्म देशको रुपमा रहेको बेलायतका चार फुटबल एसोसिएसनसित रहन्छ। खेलको नियम परिवर्तन गर्न छ भोट आवश्यक हुन्छ। बेलायतका दुई एसोसिएसन आइरिस र वेल्सले फिफासँग मिलेर प्रविधिको प्रयोगको विरोधमा मतदान गरेपछि गत मार्चमा भएको बोर्डको बैठकले हालका लागि यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने ढोका बन्द गरेको थियो। यद्यपि बैठकले चौथो अधिकारीका रुपमा एउटा थप रेफ्री राख्‍ने निर्णय भने पछि गरेको थियो। अहिले विश्वकपका खेलहरुमा चार जना रेफ्रीको नाम तपाईँ देख्‍न सक्नुहुन्छ।
संयोग पनि कस्तो !
सन् १९६६ को विश्वकपको फाइनलमा इंगल्यान्डका Geoff Hurst ले गरेको यो गोललाई रेफ्रीले मान्यता दिएको थियो। यो गोल थियो कि थिएन भन्ने विवाद अहिलेसम्म टुंगिएको छैन। त्यो बेला पनि जर्मनी र इंग्ल्यान्डबीच नै खेल भइरहेको थियो। स्कोर थियो २-२। यो गोलले इंगल्यान्ड ३-२ ले अघि बढेको थियो। खेल सकिँदा इंगल्यान्ड ४-२ ले जित्यो।
यस पटकको गोल त्यति अस्पष्ट थिएन, गोललाइनमा स्पष्टै पार गरेको देखिएको थियो। तर हालको नियम अनुसार रेफ्रीले आफ्नो निर्णयबारे स्पष्टीकरण कसैलाई पनि दिनुपर्ने छैन। विवादास्पद निर्णयबाट इंग्ल्यान्डले बराबरी गर्ने मौका मात्र गुमाएन, अन्ततः आफ्नो विश्वकप इतिहास मै ठूलो अन्तरको पराजय सहेर घर फर्कियो। त्यसका लागि विवादास्पद निर्णय मात्र हैन, इंगल्यान्ड टिमको दुई वटा डिफेन्सको गल्ती प्रमुख जिम्मेवार थियो।
This entry was posted on June 28, 2010 at 12:00 am	and is filed under जस्ताको त्यस्तै. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.